उभयचरहरूले कसरी प्रजनन गर्छन्, विशेषताहरू र तिनीहरू कस्तो छन्। ? | माछाको
कार्लोस ग्यारिडो | | उभयचर
उभयचर तिनीहरू कशेरुका जनावर हुन् तिनीहरू तराजू बिना, आफ्नो नंगे छाला द्वारा विशेषता छन्।
यस लेख मा हामी यी जनावरहरु को सबै रहस्यहरु को साथ शुरू गरीरहेछौं उभयचर को प्रजनन, उभिएका उभयचरका प्रकारहरू, केहि उदाहरणहरू र अन्य जिज्ञासाहरू जुन तपाईंलाई उपयोगी हुने निश्चित छन्।
1 उभयचर को प्रजनन
2 उभयचर प्राणीहरू, तिनीहरू के हुन्?
3 उभयचरका प्रकारहरू
4 उभयचर विशेषताहरू
5 उभयचर को उदाहरण
5.1 एन्डरसन salamander (Ambystoma andersoni)
5.2 मार्बल न्यूट (Triturus marmoratus)
5.3 सामान्य थड (बुफो बुफो)
5.4 सिन्दूर भ्यागुता (राणा अस्थायी)
उभयचर को प्रजनन
अण्डाकार हुनु, उभयचर को प्रजनन यो अण्डा को लागी हो। सरीसृप र स्तनपायी आन्तरिक निषेचन (महिला भित्र) बाट प्रजनन गर्दा उभयचर अभ्यास बाह्य निषेचन.
La उभयचर निषेचन ताजा पानी मा हुन्छ, किनभने यस प्रकारको पानी एक हुन गइरहेको छ जसले अण्डाहरूलाई तिनीहरूको विकासको क्रममा रक्षा गर्दछ र उभयचरहरूलाई भ्रुण संलग्नकहरू, जस्तै अम्नीओटिक थैली वा एलान्टोइसको आवश्यक पर्दैन, त्यसैले केही विशेषताहरू जुन अन्य स्थलीय कशेरुका उभयचर देखि भिन्न हुन्छन्।
बाह्य शरीरमा फर्टिलाइजेशनले एक विशेषता प्रक्रिया अनुसरण गर्दछ: नरले अण्डा पार्ने महिलालाई समात्छ। यी बाहिर आउँदा, पुरुष जान्छ उनीहरु मा उनीहरुको शुक्राणु छर्नु र उनीहरुलाई उर्वरक। अण्डा पानीमा रहेको कर्डमा रहन्छ वा जलीय वनस्पतिसँग जोडिन्छ। एक्वाटिक लार्भा फेरि तिनीहरूबाट देखा पर्छ।
दुबै माछा र उभयचर मा, जसमा बाह्य निषेचन हावी छ, अण्डाको पातलो आवरण हुन्छकिनभने शुक्राणुजनोले यसलाई पार गर्नुपर्दछ ताकि निषेचन हुने गर्दछ। यस कारणका लागि, यी अण्डाहरू एक अर्कामा चिप्लिएका पानीमा राख्नुपर्दछ, ठूला समूहहरू गठन गर्दै।
उभयचरaको रूपमा जन्मेका छन् जलीय लार्वा कि एक पुच्छर संग चल्छ र gills मार्फत सास। जब लार्वा, जसलाई टेडपोल भनिन्छ, पर्याप्त मात्रामा बढेको छ, यो एक प्रक्रिया बाट गुज्रन्छ कुल मेटामोर्फोसिस। वर्षावन भ्यागुताको केही प्रजातिहरूको अपवाद बाहेक, यी सुविधाहरू अन्ततः अदृश्य हुन्छन् र टेडपोलहरू बढ्ने बित्तिकै फोक्सो र खुट्टाहरू द्वारा प्रतिस्थापन हुनेछन्।
यो कशेरुका उभयचर वर्ग को वर्ग बाट बनेको छ भ्यागुता, टोड्स, सलामन्डरहरू र एक्वाटिक क्यासिलिनहरू। यी उभयचरहरु को पानी मा र बाहिर दुबै बाँच्न को लागी क्षमता छ, यद्यपि उनीहरु लाई लगातार गीला हुन को लागी यो सास फेर्ने साधन हो।
उभयचर प्राणीहरू, तिनीहरू के हुन्?
ल्याटिन मा उभयचर शब्द को एक विशिष्ट अर्थ छ, यो शाब्दिक "दुई जीवन" लाई बुझाउँछ। र यो हो कि यो यी जनावरहरु को एक विशिष्ट विशिष्टता हो, अनुकूलन र मा आफ्नो जैविक कार्यहरु गर्न को लागी सक्षम छ। दुई फरक इकोसिस्टमहरू: जमिन सतह र पानी क्षेत्रहरु। जे होस्, हामी उभयचर को अर्थ मा अलि बढी जान्न को लागी जाँदैछौं।
उभयचर जीवित प्राणीहरु को रूप मा वर्गीकृत कि महान परिवार को हिस्सा हो कशेरुका (तिनीहरूको हड्डी हुन्छ, त्यो आन्तरिक कंकाल हो) anamniotes (तपाइँको भ्रूण चार फरक लिफाफा मा विकसित: chorion, allantois, amnion, र जर्दी थैली, एक पानी को वातावरण मा यो सास फेर्न र खुवाउन सक्छ), tetrapods (तिनीहरूसँग चार अंगहरू छन्, चलाउने वा हेरफेरको) र एक्टोथर्मिक (उनीहरूसँग शरीरको तापक्रम परिवर्तन हुन्छ)।
तिनीहरूले एक अवधि भनिन्छ मेटामोर्फोसिस (परिवर्तन कि केहि जनावरहरू जैविक विकास चरणको क्रममा हुन्छन् र यसले दुबैले आफ्नो मोरफोलजी र उनीहरूका कार्यहरू र जीवनशैलीलाई असर गर्दछ)। सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन गिल्स (नयाँ) बाट फोक्सो (वयस्क) सम्मको हो।
यस महान परिवारमा जुन उभयचरहरूले बनाउँछन्, हामी तीन अर्डरमा आधारित एउटा सानो वर्गीकरण गर्न सक्छौं: अनुरन्स, caudates o urodeles y अपोडाल o जिमनोफिओना.
को अनुरन्स ती उभयचरका प्रकारहरू हुन् जुन ती सबै उभयचरहरूलाई सँगै समूहीकृत गरिएको छ जुन हामी भ्यागुता र भ्यागुताहरू भनेर चिनिन्छौं। सावधान हुनुहोस्, भ्यागुता र भ्यागुता एकै किसिमका छैनन्। तिनीहरू आफ्नो आकृति विज्ञान समानता र व्यवहार द्वारा समूहबद्ध छन्।
को urodeles ती उभयचरका अन्य प्रकारहरू हुन् जसले लामो पुच्छर र लम्बी ट्र tr्क राखेर फरक हुन्छन्। तिनीहरूको आँखा अत्यधिक विकसित भएको छैन र राम्रो छालाले ढाकिएको छ। यहाँ हामी नयाँ, सलामन्डरहरू, प्रोटो र मर्मेडहरू फेला पार्दछौं।
अन्तमा, यसका प्रकारहरू छन् अपोडाल उभयचर, जो तिनीहरूको उपस्थितिको कारण सबैमा सबैभन्दा विचित्र हो। तिनीहरू गँड्यौला वा कीरा जस्तै मिल्दोजुल्दो छ किनकि तिनीहरूको कुनै अंग छैन र तिनीहरूको शरीर बद्ली भएको छ।
हामीले अघि नै भनेझैं उभयचरहरू कशेरुका जनावरहरू हुन्, र उनीहरूलाई यसका "विशेषाधिकार" छन् अधिक आदिम यस वर्गको जनावरहरु जुन पृथ्वीमा बसोबास गर्छन् तिनीहरू करिब 300०० मिलियन बर्षदेखि करीव थिए भनिएको छ, लगभग केहि पनि छैन!
तिनीहरूको चार अंग छ: दुई अगाडी र दुई पछाडि। यी अंगहरू हडताल गर्ने नामले चिनिन्छन् प्रिय। कुइरिडस एक मानव व्यक्तिको हात जस्तो मोर्फोलोजीको रूपमा चिनिन्छ, अगाडि खुट्टामा चार औंलाहरू र पछाडि पाँचवटा। धेरै अन्य उभयचरहरूको पनि पाँचौं पुच्छ जस्तो अंग हुन्छ।
को जीवित प्राणी हुन चिसो रगत, तिनीहरूको शरीरको तापमान निर्भर गर्दछ, र धेरै, तिनीहरू वातावरणमा हुन्, किनकि उनीहरू आन्तरिक तातो नियमन गर्न सक्दैनन्। यो बल माजेरका कारणहरू मध्ये एक हो जुन उनीहरूलाई पानी र जमिनमा जीवनको अनुकूल बनाउँदछ। यी दुई प्रणालीहरूले तपाईंलाई तपाईंको शरीरलाई अत्यधिक तातो वा शीतल गर्नबाट जोगाउन मद्दत गर्छन्।
छोरा oviparousतिनीहरू अण्डाहरूबाट बाहिर निस्के जस्तै। यी अण्डाहरू जम्मा गर्ने जिम्मा महिला हो र उनी जहिले पनि जलीय वातावरणमा त्यसो गर्दछन, यसैले यी युवा नमूनेहरूमा श्वासप्रश्वास प्रणाली हुन्छ जुन स्केल हुन्छ।
यी जीवहरुको छाला हो पारगम्य, विविध अणु, ग्यास र अन्य कणहरू पार गर्न सक्षम हुँदै। केहि प्रजातिहरूले आफ्नो छाला मार्फत विषाक्त पदार्थहरू गोप्य राख्नका लागि बाह्य खतराहरू विरूद्ध एक रक्षा प्रणालीको रूपमा सक्षम छन्।
तपाईंको छालामा केन्द्रित गर्दै पनि, यो याद गर्नु पर्दछ कि यो हो भिजेको र तराजु संग depopulated, अन्य प्रकारका जनावरहरू जस्तो उनीहरू बोक्दैनन्। यस अवस्थाले तिनीहरूलाई पानी र उचित रूपमा अवशोषण गर्न अनुमति दिन्छ। यसको विपरित, यसले उनीहरूको प्रक्रियामा धेरै कमजोर बनाउँछ निर्जलीकरण। यदि एक उभयचर कम आर्द्र वातावरणमा छ भने, यसको छाला चाँडै सुक्नेछ, जसले गम्भीर समस्या र मृत्युसमेत निम्त्याउन सक्छ।
यी जनावरहरु को एक परिसंचरण प्रणाली हो जसको मुख्य भाग एक हो tricameral मुटु दुई अट्रिया र एउटा ventricle बाट बनेको। यसको संचलन बन्द, डबल र अपूर्ण छ।
आँखाहरु सामान्यतया भारी हुन्छन् र, बरु, बल्जिंग, जो एक को सुविधा दृश्य को ठूलो क्षेत्र धेरै उपयुक्त जब शिकार सम्भावित शिकार। Newts जस्तै अपवादहरु छन्।
यद्यपि यो यो जस्तो लाग्न सक्दैन, उभयचर उनीहरूको दाँत छन्, भले ही यी दुर्लभ छन्। यसको कार्य खाना पकड मद्दत गर्न छ। जिब्रो पनि अन्य साना जनावरहरु लाई कब्जा गर्न को लागी एक उत्तम साधन बन्छ। उनीहरु क प्रस्तुत गर्दछन् ट्यूबलर आकारको पेट, एक छोटो ठूलो आंत, दुई गुर्दे, र एक मूत्राशय संग।
उभयचर को उदाहरण
वर्तमानमा, त्यहाँ केहि वरिपरि cataloged छन् उभयचर को 3.500 प्रजातिहरु। जे होस्, वैज्ञानिकहरु, आफ्नो अनुमान मा, भविष्यवाणी गर्छन् कि कुल संख्या को आसपास हुन सक्छ 6.400.
जब हामी उभयचर को बारे मा सोच्दछौं, एक भ्यागुतो वा एक टाउको को छवि सधैं हाम्रो टाउको मा देखिन्छ, तर हामी पनी अन्य जनावरहरु जस्तै newts र salamanders छन्।
यी उभयचर को मात्र केहि उदाहरण हुन्, यद्यपि, पक्कै, त्यहाँ धेरै धेरै छन्:
एन्डरसन salamander (Ambystoma andersoni)
यो प्रकार को सलामन्डर लाई axolotl वा purepecha achoque को रुपमा पनि चिनिन्छ। यो एक स्थानिक प्रजाति हो, त्यो हो, यो मात्र एक निश्चित ठाउँ मा अवस्थित छ। यस अवस्थामा, यो मात्र Zacapu Lagoon मा बस्छ, Michoacán (मेक्सिको) को राज्य मा स्थित छ।
यो मुख्य रूप मा एक बरु मोटो शरीर, छोटो पुच्छर र गिल्स भएको विशेषता छ। यसको सुन्तला वा रातो र,, यसको कालो धब्बाहरु लाई जोडिएको छ कि यसको सम्पूर्ण शरीर को सतह मा फैलिएको छ, यो कसैको ध्यान नदिईन्छ।
मार्बल न्यूट (Triturus marmoratus)
यो जनावर विशेष गरी स्पेनको उत्तर र फ्रान्सको पूर्वमा युरोपियन क्षेत्रमा अवस्थित छ। यसमा हरियो रंग छ र यसका साथ धेरै स्ट्राइक हरीनो टोनहरू छन्। थप रूपमा, यसको पछाडि रातो रment्गको एक धेरै विशिष्ट ठाडो रेखा द्वारा पार गरिएको छ।
सामान्य थड (बुफो बुफो)
यो धेरै यूरोप को लगभग सम्पूर्ण महाद्वीप र एशिया को भाग मा पाउन को लागी सामान्य छ। स्थिर पानी, सिँचाइ क्षेत्रहरु, आदि बाट बनेको बासस्थान लाई प्राथमिकता दिन्छ। सायद, अस्वस्थ पानी मा बस्ने अवस्था को लागी यति प्रतिरोधी हुनाले यसलाई सबैभन्दा व्यापक र प्रसिद्ध उभयचर मध्ये एक बनाएको छ। यो चम्किलो रंग छैन, बरु यसको छाला एक "खैरो" टोन को छ, warts को रूप मा धेरै धक्के द्वारा कभर।
सिन्दूर भ्यागुता (राणा अस्थायी)
माथि उल्लेख गरिएका आफ्ना आफन्तहरु जस्तै, यो उभयचर पनि यूरोप र एशिया आफ्नो घर बनाएको छ। जे होस् यो आर्द्र ठाउँहरु लाई रुचाउँछ, यो भ्यागुतो पानी बाट धेरै समय बिताउँछ। यो एक निश्चित रंग ढाँचा संग सम्बन्धित छैन, तर प्रत्येक व्यक्ति फरक रंग प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बावजूद, साना धब्बाहरु संग खैरो छाला को प्रबल हुन्छ। पोइन्टेड स्नुट यसको एक पहिचान हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: माछाको » अरूलाई » उभयचर » उभयचर